Dastabej » अभिनयमा सुनजस्तै सुनिता
अभिनयमा सुनजस्तै सुनिता – Dastabej
अभिनयमा सुनजस्तै सुनिता
मोडलिङका नाममा अंग प्रदर्शनको होडबाजी चलेको छ । तर जस्तो पनि भिडियो खेलेर धेरै हिट हुनुपनि छैनर्‍ स्नातक गरेकी सुन्दरी भन्छिन ।
नेपालगन्ज— सानै हुँदा उनी विभिन्न खाले अभिनाय गर्ने प्रयास गर्थिन । नाच्थिन । उफ्रिन्थिन । बिद्यालयमा हुने सांस्कृति कार्यक्रममा भाग लिने गर्थिन । घरबाट बिद्यालय आउजाउ गर्दा नाच्ने र अभिनायमै रमाउथिन् । उनको बानी देखेर धेरैजना छक्क पर्थे । कसैले कति हल्का बानी हो भनेर टिप्पणी गर्थे । आमाबुबाले पनि बिद्यालय जाँदा बाटोमा नाच्न अभिनय नगर्न अनुरोध गरे । तर उनको रुची नै अभिनयमै थियो । अभिनय गर्ने बानीका अगाडि उनी मजबुर थिईन ।
त्यही बानीले हाल उनी चल्तीका मोडेल बन्न सफल भएकी छन् । बर्दिया गुलारिया नगरपालिका खैरापुरकी सुनिता चौधरी थारु गीतमा मात्रै सिमित नभएर नेपाली भाषाको गीत र सिरयलमा मजाले जमेकी छन् । ‘सुरुमा सडक नाटकमा खेले । पछिपछि नेपाली गीतमा पनि अभिनय गर्ने अवसर जुर्यो,’ २५ वर्षीया सुन्दरी सुनिताले भनिन्,‘मोडलिङभन्दा पनि मलाई अभिनय गर्न मन पर्छ । त्यो पनि फरकफरक भूमिकामा ।’
उनले अभिनय गरेको ‘रहर ३’ ले दर्शकलाई भावुक मात्रै गर्दैन रुवाउँछ पनि । नेपाली भाषाको सिरयल दृष्टिमा बेजोड अभिनय गरेकी छन् । करोड, लक्ष्मीपूजा नाम नाटकमा उनी जबर्जस्त भूमिकामा देखिएकी छन् । पछिल्लो दुई वर्षयता मात्रै उनी मोडलिङमा आएकी हुन । त्यो भन्दा पहिले कलाकारका रुपमा अभिनयमै व्यस्त छिन । ढिलो गरी मोडलिङमा आएकी उनी चल्तीको कलाकारमा परेकी छन् । ‘एउटा गीतमा मोडलिङ गरेको १० हजार पारिश्रमिक लिन्छु,’ उनले भनिन्,‘जस्तो पायो त्यस्तोमा खेल्दिन म ।’
पछिल्लो समय थारु गीतको नाममा अनेकखाले बिकृती बढ्दै गएको छ । मोडलिङका नाममा अंग प्रदर्शनको होडबाजी चलेको छ । तर सुनिता भने त्यसको पक्षमा छैनन् । त्यसैले उनलाई धेरैले कलाकारिताको सुन भन्छन् । ‘बिकृती देखिने गरी अभिनय गर्दिन,’ उनले भनिन् ।
०७१ देखि कलाकारितामा प्रवेश गरेका उनी बाल्यकालदेखि सडक नाटक खेल्थिन । गाउँघरके छैली, मै तुहार दिवानी, रहर पार्ट ३, नेपाली गीत मेरो पनि मन छ, बनवा मे बाटै बाघबघिनी (झुम्रा, दिदिके देवर दिवाना, किहिन लुटादिउ जोबन्वा, मदुवा ३ भुरभुरा रहर, पागल मन लगायतका भिडियोमा उनको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
शिक्षा बिषयमा स्नातक गरेकी उनी जस्तोसुकै अभिनय सहजै गर्न सक्छिन् । हँसिलो स्वभावकी उनी गम्भीर, रोदन, समाजबाट पीडित चेलीको पात्रका रूपमा आफूलाई नाटकमा प्रस्तुत गर्छिन्। ‘जस्तो त्यस्तै भिडियो खेलेर मलाई धेरै हिट हुनुपनि छैन,’ उनले भनिन् ।
२२ मंसिर २०७७, सोमबार १७:३४ प्रकाशित
कलयुगका श्रावण कुमार
कोरोना अस्थाई अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
‘हटस्पट’ मा घट्यो संक्रमणको ग्राफ
२.	बाँकेका सिडिओ गेलालः जसले धुब्रेलाई गोली हान्ने आदेश दिएका थिए
३.	कारकाँदो चोकमा प्रहरीमाथि दुरब्यवहार (भिडियो)
४.	मानखोलाको जंगलबाट चरेस सहित ३ जना पक्राउ
५.	अस्पतालमा किन हुन्छ कोरोना विरामीको बढी मृत्यु ?
६.	लखेटीलखेटी आक्रमण,नर्सहरु एक तलाको झ्यालबाट हाम फाले
७.	बाँकेमा फेरि किन थपियो निषेधाज्ञा ?
८.	विपदमा सहयोगी विमल
९.	कोहलपुरमा धाराबाट आफै बग्थ्यो पानी, चुरे विनासपछि सुक्यो धारा र खानेपानी
१०.	आँखै अगाडि छटपटिएर मृत्यु भएको देख्दा रुन्छन् कोरानाका विरामी र कुरुवा